အက္ခရာခံ silicone ပြွန်တရုတ်ကာရံထားသောလက်ပေးသွင်းသူ - လက်ကားရောင်းသူနှင့် ၀ ယ်ယူမှုလျှော့စျေးထုတ်လုပ်ခြင်း - Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd.
အဆင့်ဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော flungglass လက်ရှည်
silicone flberglass လက်
silicone Fiberglass လက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > insulator တွင်လည်းလက် > ဆီလီကွန်ပြွန် > Braided ဆီလီကွန်ပြွန်
Braided silicone ပြွန်သည်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားခံနိုင်ခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပြွန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ fibra thread, နိုင်လွန်ကြိုး၊ အပူဝါယာကြိုး၊ စတီးဝါယာကြိုးစသည့်အမျိုးမျိုးသောကျိုးထားသည့်ဝါယာကြိုးများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Braided silicone ပြွန်သည်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အနုတ်လက္ခဏာဖိအားခံနိုင်ခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပြွန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ fibra thread, နိုင်လွန်ကြိုး၊ အပူဝါယာကြိုး၊ စတီးဝါယာကြိုးစသည့်အမျိုးမျိုးသောကျိုးထားသည့်ဝါယာကြိုးများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်ရှိစျေးကွက်တွင်အဓိကယက်လုပ်ခြင်းမှာအမျှင်မျှင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကော်ဖီစက်ဆီလီကွန်ထည်ပြွန်၊ လေဖိအားနှင့်အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်း မှလွဲ၍ အစားအစာတန်းရှိဆီလီကွန်ပြွန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ။ ယေဘူယျဆီလီကွန်ပြွန်များမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆီလီကွန်ပြွန်များ၊ အစားအစာအဆင့်ရှိဆီလီကွန်ပြွန်များ၊ စက်မှုဆိုင်ရာဆီလီကွန်ပြွန်များ၊ အထူးစီလီကွန် silicone ပြွန်များ၊
Braided silicone ပြွန်စွမ်းဆောင်ရည်:
၁။ Braided silicone tube သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော silicone silicone ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်မရှိသော၊ မွှေးကြိုင်သောကြောင့်မြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ ဆီလီကွန်ပြွန်နှင့်ဆီလီကွန်ပစ္စည်းများသည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ပြင်းထန်သောအယ်လကာလီ မှလွဲ၍ ဟိုက်ပိုဖလိုရစ်အက်ဆစ်သည်မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းနှင့်မဆိုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဓာတ်ပြုခြင်းမရှိပါ ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်၊ အသက်အရွယ်နှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိသော၊ နေ့စဉ်ဘဝတွင်အသုံးပြုသောပိုက်များကို silica gel ဖြင့်ပြုလုပ်ကြပြီး၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
၂။ အခန်းအပူချိန်တွင်ထားသည့်အခါအဝါရောင်မရှိပါ၊ အပွင့်မရှိ၊ အဖြူရောင်မရှိခြင်း၊ ရေမွှေးခြင်း၊ ရေထုတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာပျက်စီးခြင်းမရှိခြင်း။
Braided Silicone Tube ၏အင်္ဂါရပ်များ:
၁။ အဆိပ်မရှိသော၊ အနံ့မရှိ၊ မြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊
2. ပျော့ပျောင်း။ ကောင်းသော elasticity၊ kink ကိုခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း၊
၃။ အက်ကွဲခြင်း၊ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၊ အအေးနှင့်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်း၊
6. မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်: -60 ဒီဂရီ -200 ဒီဂရီ
၇။ အပူခံနိုင်ရည် - အစားအစာ silica gel သည်သာမာန် silica gel ထက်အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ 150 ° C တွင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ 200,000 ° C တွင်နာရီပေါင်း ၁၀၀၀၀ အသုံးပြုသည်။ 250 ° C တွင်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၈။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည် - ပုံမှန်စီလီကာဂျယ်လ်သည် Corona စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှထုတ်လွှတ်သောအိုဇုန်းလွှာများ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်လျင်မြန်စွာယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီးအစားအစာ silica ဂျယ်လ်သည်အိုဇုန်းလွှာကိုမထိခိုက်ပါ။ ထို့အပြင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းနှင့်အခြားရာသီဥတုအခြေအနေများတွင်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမှာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုသာရှိသည်။
၉။ အိုမင်းခြင်းကိုခံသော၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ silica gel သည်အစွမ်းသတ္တိရှိသည်။
၁။ ပိုက်လိုင်းများ၊ ပြွန်များနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊
2. တွန်း, ဆန် cooker ပြွန်, etc ။ ;
၃။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်အဖုအကျိတ်များနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များ။ ;
၆။ ကလေးငယ်များအတွက်စုပ်ယူရန်အတွက်ရေပေးစက်၊ ကော်ဖီအိုးများ၊ ဆက်သွယ်ထားသောပိုက်များနှင့်ပိုက်လိုင်းများစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
Braided ဆီလီကွန်ပြွန် parameters တွေကို:
GB ကို / T က, 6031-1998
GB ကို / T က, 533-1991
GB ကို / T က, 12828-1991
GB ကို / T က, 528-1998
GB ကို / T က, 529-1999
GB ကို / T က, 1681-1991
GB ကို / T က, 17037-2003
GB ကို / T က, 1692-1992
၃.၅ × ၁၀
၃.၀ × ၁၀
ကေဗွီ / မီလီမီတာ
GB ကို / T က, 1695-2005
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါအချက်အလက်များသည်ပုံသွင်းခြင်း vulcanization ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်ဖြစ်သည်။
vulkanizing agent C-8၊ ဖြည့်စွက်ပမာဏသည် ၂% ဖြစ်ပြီး၊ ကုသမှုအခြေအနေမှာ ၁၇၀ × ၅ မီလီမီတာ× ၁၅ မီတာရှိသောနှုန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်နိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါမည်။ တိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုပင်ကိုယ်မူလစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ကျပန်းစမ်းသပ်မှု။ ဒါကထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် SGS သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလက်မှတ်နှင့် UL လျှို့ဝှက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ၁၆၉၄ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုနှင့်မီးလျှံတားဆီးမှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ရောင်းအား -ကြိုတင်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊
ရောင်းရန်:In-sale သည်ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားဖြင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်းနှင့်ပြcustomersနာများကိုဖြေရှင်းပေးရန်ဖောက်သည်များအားကြိုတင်တွက်ချက်ခြင်း။
ထုတ်ကုန်ကိုယ်နှိုက်၏အရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း 1. မကျေနပ်မှု။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်ပြproblemနာအားတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
၂။ အကယ်၍ ထုတ်ကုန်ကိုလူလုပ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပုံမှန် အသုံးပြု၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းကိုဖောက်သည်အားရှင်းပြပြီးဤပြသနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်မှမပါ ၀ င်ပါကဝယ်သူ၏ပြproblemနာပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူအားအခြားဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။
၁။ ကုန်ကြမ်းပြproblemနာ - ပွင့်လင်းမြင်သာသောအဖြူရောင်ကာဗွန်အနက်ရောင်သည်မသန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်အခြားအဖြူရောင်ကာဗွန်အနက်ရောင်များနှင့်ရောနှောနေသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
၂။ Coking ပြ:နာ - ဒြပ်ပေါင်းသည်တစ်ပုံစံတည်းရောနှောခြင်းမရှိသလောက်။ ဖြည့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်မဆင်ခြင်နိုင်ပါ၊ ကော်ကော်နှင့်အပူချိန်နှင့်အချိန်တို့ကိုကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။
၁။ ကုန်ကြမ်းများပြproblemနာကို ဦး တည်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအဖြူရောင်ကာဗွန်အနက်ရောင်ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်ဖန်းဆေးပြီးနောက်သန့်ရှင်းသောရော်ဘာကိုသန့်စင်ပါ။
၂။ လည်ပတ်နေစဉ် silicone ရော်ဘာ vulcanizing agent နှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနှင့်။ ရော်ဘာများကို vulcanize မဖြစ်စေရန် amines, sulfur နှင့် phosphorus ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်သတ္တုဆားများလည်းရှိသည်။
Hot Tags: insulator တွင်လည်းလက်, တရုတ်, Braided silicone ပြွန်ထုတ်လုပ်သူ, လက္ကား, ဝယ်, စျေးနှုန်း, အမြောက်အများ, လျှော့စျေး, quotation အ။
ဖန်မျှင်ထည် acrylic လက်
ဖန်မျှင်ထည် Polyurethane ကာကှယျဆေး
: တတိယထပ်၊ အဆောက်အ ဦး ၆၊ Jilong စက်မှုဇုန်၊ Changlong ကျေးရွာ၊ Huangjiang မြို့၊ Dongguan City, Guangdong ပြည်နယ်
ကျည်ကာအင်္ကျီလက်များ၊ အပူစွမ်းအင်ကျုံ့နိုင်သောပြွန်များ၊ ဆီလီကွန်ပြွန်၊ PET ပြွန်၊ PVC ပြွန်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd. သည်စက်ရုံ၊ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဆယ်နှစ်ကြာမျှဆီလီကွန်ဖိုက်ဘာမှန်အင်္ကျီလက်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုခဲ့ပြီးဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပညာရှင်များသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ဆီလီကွန်ဖိုင်ဘာဖန်ထည်အင်္ကျီလက်သည်သင့်တော်သောနေရာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
© copyright 2020-2021 Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd. Dongguan Dayonglai ပစ္စည်းအသစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်